यी ४ महिनामा जन्मिएका महिला हुन्छन् माता लक्ष्मीका प्रिय – Sandesh Press
फेब्रुअरी महिना :निकै बुद्धिमानी हुने गर्छन् । ग्रह चालको कारण यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु विवाहपछि पनि भाग्य निकै चम्कन्छ । त्यसकारण फेब्रुअरी महिनामा जन्मने महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा लिने गरिन्छ।
अप्रिल महिना : छिट्टै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने गर्छन् । सधै भाग्यले साथ दिने भएकाले उनीहरु प्रगतिको पथमा हुने गर्छन् । विवापछि पनि उनीहरुको कारण पतिलाई शुभ नै शुभ हुनेछ ।
जुन महिना : शास्त्रले खासै राम्रो नमानेपनि उनीहरुलाई भाग्यले सधै साथ दिएको हुन्छ । उनीहरु जुझारु र कर्मठ हुने भएकाले मेहनतलाई खेर जान दिँदैनन् । त्यसकारण यो महिनामा जन्मिने महिलालाई भाग्यले सधै साथ दिन्छ ।
सेप्टेम्बर महिना :मेहनत नगरेपनि सजिलै सफलता पाउन सक्छन् । उनीहरुले विवाहको लागि पनि धनि केटा भेट्छन् ।जन्म महिना, दिन, गते, बार, समयले व्यक्तिको भविष्यमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । जबकी कोही व्यक्ति यति भाग्यमानी हुन्छन् उनीहरुले हरेक कार्यमा सफलता हाँसिल गर्न सफल भएका हुन्छन् ।
सेप्टेम्बर महिना :मेहनत नगरेपनि सजिलै सफलता पाउन सक्छन् । उनीहरुले विवाहको लागि पनि धनि केटा भेट्छन् ।
Prevप्रचण्डले के भने त्यस्तो ? अमेरिकाले दियो चेतावनी
Nextसाबधान ! महामारीको बीच काठमाडौंमा देखियो यस्तो रोग, सचेत रहनुहोस !
भखरै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा बुद्ध एयरको विमान जनावरसंग ठो’क्कियो
आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन्:छोरा फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ नलडी जानु है !